Relationship – BaHuTuTa
ခင်ပွန်းကိုပြန်ရောင်းဖို့ မယားငယ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ မယားကြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် အမျိုးမျိုးစိတ်ညစ်ခဲ့ရပေမယ့် သူမရဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့မယားငယ်က ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခင်ပွန်းကိုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ရူပီးသိန်း (၅၀) ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုပါ။ အဲဒီကမ်းလှမ်းမှုကို မယားကြီးဖြစ်သူက ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ […]
မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ် ကောင်မလေးက ပို့စ်မပေးတတ်သဖြင့် စကားများရင်း ရိုက်ကွင်းမှာတင် ကွဲပြဲသွားကြတဲ့ စုံတွဲ
လူသားတို့သည် လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြပြီဆိုကတည်းက တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုနားလည်ပြီး နှစ်ဦးလုံးရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုခိုင်မြဲစေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် အခြားသော မင်္ဂလာစုံတွဲတွေလို ဝတ်စုံအရောင်တူမဟုတ်ပဲ သတို့သားမှာ သူကြိုက်တဲ့အရောင်ကို သူရွေးချယ်ဝတ်ကာ သတို့သမီးမှာလည်း သူကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရောင်ကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် အရောင်ကွဲနေခြင်းဖြင့် အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်နေသည့်အပြင် မင်္ဂလာဓာတ်ပုံရိုက်သည့်အခါမှာလည်း တည့်တည့်ရှူရှူမရှိပဲ […]
ငယ်စဉ်ကလို ခင်ပွန်း၏ အချစ်ကို ပြန်လိုချင်သောကြောင့် မျက်နှာခွဲစိတ်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် ခင်ပွန်းသည်မှ အိမ်ပေါ်ကမောင်းချလိုက်တာ ခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်
တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်လင်းမြင်သာမရှိတဲ့အခါ တစ်ဦးနဲ့နစ်ဦး အထင်အမြင်ကွဲလွဲတတ်တာ သဘာ၀လို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယခုလည်း ခင်ပွန်းရဲ့အချစ်တွေကို ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပြန်လိုချင်လို့ မျက်နှာကိုပြောင်းလဲခဲ့ရာမှ အချစ်မခံရသည့်အပြင် ခင်ပွန်းသည်၏နေအိမ်မှ မောင်းထုတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် ၅၉နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးရဲ့ အဖြစ်ကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Zhejiangပြည်နယ် Hangzhouမြို့မှ Shenဆိုသည် အသက်၅၉နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အဖြစ်ကတော့ […]
ညီမအရင်းနဲ့ ကလေးယူမယ့် အစီအစဉ်ကို သေချာရှင်းပြခဲ့တဲ့အမျိုးသား
လိင်တူချစ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ အသက်(25)နှစ်အရွယ် Samuel Leighton-Dore နဲ့ သူရဲ့ လိင်တူချစ်သူ Bradley Tennant တို့ဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့မှာ နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေဟာ သဘာဝကို ဆန့်ကျင်စွာနဲ့လိင်တူအချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပေမယ့် ကလေးလိုချင်တဲ့ ဆန္ဒမှာလည်း အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ကလေးကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ […]
တန်ဖိုးရှိသူထံမှ သင့်ကိုပေးတတ်တဲ့ သင့်ကို တန်ဖိုးပိုမြှင့်စေတဲ့အရာများ
တန်ဖိုးရှိသူထံမှ သင့်ကိုပေးတတ်တဲ့ သင့်ကို တန်ဖိုးပိုမြှင့်စေတဲ့အရာများ ၁။ မင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်တဲ့သူဆီမှာပဲမင်းရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြုပ်နှံထားပါ။ မင်းကို ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် အမူအကျင့်လေးတွေကို လုပ်ပြပါ။ ၂။ မင်းကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ဖော်ပြပါ။ ၃။ မင်းကို ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ […]
အပြင်မှာ သောက်စားမူးရူးပြီး အိမ်မပြန်နိုင်သည့် ခင်ပွန်းသည်ကို လာကြိုသည့် ဇနီးသည်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကြောင့် လူအများ သဘောကျနေခဲ့ရ
ယောကျာ်းလေးအများစုကတော့ သူငယ်ချင်းများနှင့် သောက်စားပျော်ပါးနိုင်ရန်အတွက် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကို ရှာဖွေနေတတ်ကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်လာရင် လင်မယား ဘယ်ကိစ္စမဆို ဖေးမ အထောက်အကူပြုကာ မှီခိုကြရပါတယ် ။ အဲလိုချိန်တွေမှာ လင်ယ ောကျာ်းက အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းများနဲ့ စားသောက်တွေဆုံပြီး အမူးလွန်တဲ့အခါ ဇနီးသည်က ဘယ်လို လုပ်ဆောင်လဲဆိုတာ လူအများ သဘောကျစရာ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ […]
(၂၁)နှစ်အရွယ် လူမျိုးခြားချစ်သူကို လက်ထပ်ယူနိုင်ဖို့ ယွမ်သန်း၄၀ ဖြင့် တင်တောင်းခဲ့သည့် (၆၃)နှစ် အရွယ် ပန်းချီဆရာတစ်ဦး
(၂၁)နှစ်အရွယ် လူမျိုးခြားချစ်သူကို လက်ထပ်ယူနိုင်ဖို့ ယွမ်သန်း၄၀ ဖြင့် တင်တောင်းခဲ့သည့် (၆၃)နှစ် အရွယ် ပန်းချီဆရာတစ်ဦး ချစ်ခြင်းမေတတ္တာဟာ အဆုံးမရှိဆိုသလို အချစ်စစ်တစ်ခုဖြင့် ဖန်တီးတည်ဆောက်မယ့် မိသားစုကမ္ဘာမျိုးကတော့ အလွန်ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာကောင်း ကြည်နူးစရာကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ထူးထူးခြားခြား အသက်အရွယ်ရော နိုင်ငံ လူမျိုးခြားပါ ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို […]
ဇနီးလောင်းဖြစ်လာတဲ့ကောင်မလေးက နှစ်(၃၀)အကြာတုန်းက လမ်းပေါ်မှာ နမ်းခဲ့သောမိန်းကလေးဖြစ်နေ
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Baguio မြို့ရှိတစ်နေရာရာမှာ ဒီကောင်လေးငယ်ဟာ ကျပန်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဆီသို့ လမ်းလျှောက်သွားကာ သူမရဲ့နဖူးကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် သူတို့ဟာ နှစ်အနည်းငယ် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုကြာပြီးနောက်မှာ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အကြင်လင်မယားဖြစ်သွားခဲ့လိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။ “အံ့သြစရာ တိုက်ဆိုင်မှုပါလား ၊ကံကြမ္မာ က ချစ်ခြင်းရဲ့မှော်ဖြစ်တယ်! […]
သင့်အချစ်ရေးကို အမှန်ဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့ အပျော်ရွှင်ဆုံးလို့ သင်ထင်တဲ့ ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပြီး အဖြေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
သင့်အချစ်ရေးကို အမှန်ဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့ အပျော်ရွှင်ဆုံးလို့ သင်ထင်တဲ့ ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပြီး အဖြေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ အပေါ်မှာ ပြောထားသလိုပါပဲ ပြထားတဲ့ ပုံလေး ၃ ပုံမှာ သင့်အနေနဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပုံကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ရင် ရွေးထားတဲ့ နံပါတ်အတိုင်း အောက်ပါစာကို ဖတ်ကြည့်ပါ ၊ သင့်အချစ်ရေးနဲ့ […]
ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ကောင်မလေးကို ရင်းနှီးမှုရအောင်ကြိုးစားပေမဲ့ သူမဘက်က မထုံတက်တေးလုပ်နေတာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါတင်မက ဒီလိုအပြုအမူတွေပါ လုပ်နေတာလား?သူတို့ဒီအပြုအမူတွေလုပ်နေတာကလည်း အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်… အတိတ်အကြောင်းကို ပြန်အစမဖော်ဘူး သင့်ဘက်က သူ့အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားစရင်တောင် သူမကစကားစဖြတ်ပစ်တာမျိုး။တစ်ခြားစကားလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်တာမျိုးလုပ်နေလား? သူမဘက်က သင့်ကိုသဘောကျတဲ့အရိပ်အယောင်မျိုးရှိနေပေမဲ့ တစ်ခုခုခြားထားသလိုမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသင်မသိဘူး။တကယ်တော့ သူမရဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်ကိုပြောပြလိုက်ရင် သင့်ဘက်က သူမကိုစိတ်ပျက်စရာရှာတွေ့သွားမှာကိုကြောက်နေလို့ပါ။ သင့်ဘက်က စကားတွေပြောနေပေမဲ့ သူမရဲ့စာပြန်တာတွေကတော့နောက်ကျနေတယ် ဒါက သူမဘက်က […]